> Resource> iTunes> Olee naghachi Lost Ndi ana-akpo site na iTunes ndabere File
Ị pụrụ naghachi furu efu kọntaktị site na iTunes ndabere faịlụ?
Ọ na-ebe mara na iTunes nwere ike igbanye a ndabere faịlụ gị iOS ngwaọrụ mgbe ọ na-synced. Otú ọ dị, n'ihi na nchekwa, Apple adịghị ekwe ka onye ọ bụla iji nweta ma na-ele data na nkwado ndabere na mpaghara, ma ị na weghachi ya kpamkpam gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka. Nke ahụ bụ na-ekwu, i kwesịrị inye ihe niile ẹdude data na ngwaọrụ gị. Gịnị ma ọ bụrụ na ị na-efu a ole na ole kọntaktị na ngwaọrụ gị na ị na-achọghị ka overwrite ẹdude data na ngwaọrụ gị? Enwere ụzọ na i nwere ike naghachi kọntaktị si iTunes ndabere na-enweghị na-eweghachiri?
O doro anya na, azịza ya bụ ee, ma mkpa ka i nwere ihe iTunes ndabere extractor, nke nwere ike inyere wepụ dum ọdịnaya na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ ma ị nwere ike selectively naghachi ọ bụla ị chọrọ site na. Na-agụ na na-eso nzọụkwụ n'okpuru iji weghachite gị furu efu kọntaktị si iTunes ndabere faịlụ.
Nzọụkwụ nke-ewepụta kọntaktị si iTunes ndabere
Ihe ị chọrọ mbụ: Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows).
Họrọ onye ziri ezi n'ihi na kọmputa gị sistemụ na ibudata na ikpe mbipute n'okpuru ugbu a.
Nke a iOS data mgbake software-enyere gị aka wepụ niile iTunes ndabere faịlụ maka iPhone, iPad na iPod aka. The dum usoro na-ewe gị abụọ nzọụkwụ, na i nwere ike ihuchalu niile data na nkwado ndabere na mpaghara tupu azọpụta ya na kọmputa gị. Ọzọ, ka na-na Windows version nke Wondershare Dr.Fone maka iOS dị ka ihe atụ.
Nzọụkwụ 1. Run usoro ihe omume ma họrọ a ndabere faịlụ
Nke mbụ niile, na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị mgbe ị na-na-na na ebudatara ma wụnye ya. Mgbe ahụ, pịa naputa site na iTunes ndabere File n'elu nke usoro ihe omume na-amalite window. Ozugbo, ị ga-ahụ ihe omume si window show dị ka ndị a. N'ebe niile iTunes ndabere faịlụ na kọmputa gị a hụrụ na-egosipụta na a ndepụta.
Ọ bụrụ na ị synced ihe karịrị otu iOS ngwaọrụ na kọmputa, ị ga-ahụ a ole na ole ndabere faịlụ n'ebe ahụ. Họrọ onye na ebe ị na-aga na-agbake kọntaktị, na pịa Malite iṅomi ka extact ya.
Nzọụkwụ 2. Tulee na-agbake kọntaktị si iTunes ndabere
Doppler agaghị ewe gị ogologo. Na sekọnd ole na ole, ị ga-enweta a Doppler N'ihi ka e gosiri n'okpuru si usoro ihe omume.
Na Doppler N'ihi ya, ị nwere ike ịhụchalụ niile hụrụ data na nkwado ndabere na mpaghara, gụnyere kọntaktị, ozi, photos, dee, na otú pụta. Ka ịhụchalụ na kọntaktị, ị nwere ike pịa ihe Ndi ana-akpo na n'aka ekpe nke window. Mgbe ahụ, ị nwere ike ịgụ aha, ụlọ ọrụ, nọmba ekwentị na adreesị email esịne ke kọntaktị. Lelee ha otu otu na nne Mmetụta ihe ị chọrọ. Ị nwere ike ịzọpụta ha ka gị na kọmputa site na ịpị Naghachi bọtịnụ na ala nri akuku.